नेपाली सामु झुक्याे बहराइनकाे कम्पनी, घर फर्किन चाहनेलाई सेवासुविधा सहित पठाइदिने ! « Bagmati Online
नेपाली सामु झुक्याे बहराइनकाे कम्पनी, घर फर्किन चाहनेलाई सेवासुविधा सहित पठाइदिने !
काठमाडौं । बहराइनको एनएसएच कम्पनीबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि प्रक्रिया थालिएको छ । बहराइनमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार कम्पनी व्यवस्थापकसँग भएको विवादपछि स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली श्रमिकको स्वदेश फिर्तीका लागि नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरणसमेत गरिएको जनाएको छ ।
कम्पनीमा विभिन्न समस्याहरू भएपछि एनएसएच कम्पनीमा कार्यरत ७ सयभन्दा धेरै श्रमिक काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । श्रमिकहरूले काम छाडेर आन्दोलन थालेपछि दूतावासले समस्या समाधानको बाटो अघि बढाएको हो । नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानका लागि बहराइन सरकारसमेत सकारात्मक देखिएको छ । अब छिट्टै सबै श्रमिकको विश्वास लिएको दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासले एनएसएच वा बहराइन कै अन्य स्थानमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई नियम पूर्ण पालना गर्दै नेपाल र बहराइनबिचको मित्रवत सम्बन्धमा थप टेवा पु¥याउने गरी काम पनि अनुरोध गरेको छ ।